Semalt: Ramba Wakachengetedzwa Kubva Idzi 6 Kutengesa KwepaIndaneti
Vaiti vezvakaipa vanopinda nhamba yakawanda yemabhizimusi eInternet nemunhu mumakore achangopfuura. Nhare dzepaIndaneti uye maitiro anoita kuti zvive nyore kwatiri kubhadhara zvikwereti, kutenga zvinhu zvatinoda, kuchengetedza hotela uye kuita mabasa akasiyana-siyana. Panguva imwecheteyo, iwe unobatwa nevanokuvadza, uye iwe hauna kuwana pfungwa yezvinoitika. Kutengesa zvishandiso uye nzira zvinokonzera kubva kuvashambadzi vekurwisa vatengesi kune software yakaipa kune zvikure kure. Vamwe vanhu vanobatwawo nekunyengedzwa kwehupenzi hwemapenzi dzinotorwa kubva munzvimbo isingazivikanwi yenyika - "IT" support services san jose.
Oliver King, Mutengi Wekugutsikana Kwevateresi Semalt , anotsanangura 6 nhamba dzekutsvaga dziri kuwanda dziri nengozi nhasi.
1. International lottery
Kuzvidza uye vatengesi vanowanzotarisirwa kuUnited States neCanada. Vanoshandisa maawa emafaira kana kuti mafoni kuti vanyengere vatengi kuti vatenge mabhetiti akakwirira. Vanoita sokuti unogona kukunda chimwe chinhu chisingaoneki kuburikidza nematotari aya. Nhamba yakawanda yevanhu inobatwa uye inoshandisa zviuru zvemadhora pane zvirongwa izvi. Federal Trade Commission (FTC) inotaura kuti mishandirapamwe yepurogiramu inogona kunge inhare.
2. Fake virus (iyo inowanikwa chaiyo)
Ichokwadi kuti mishonga yekugadzirwa kwezvinhu uye magadziri anowanzotanga mavirusi uye malware. Kana iwe ukaona kuti kombiyuta yenyu isiri kufamba zvakanaka kana iyo yakavharwa, kune mikana yokuti ine utachiona. Unofanira kuisa antivirus software nekukurumidza. Zvisinei, dzimwe 'mavhairasi akaipa' anogonawo kurwisa kombiyuta yako. Vanononoka pasi nekukurumidza kwefaira yenyu, uye iwe unomanikidzwa kuisa imwe software. Somugumisiro, mavairusi akabatana anova chaiwo uye anobata ruzivo rwako rukuru. Iyo chete nzira yekugadzirisa dambudziko iri ndechokuti iwe hausi kuisa software iwe hauna chokwadi nezvazvo..
3. Zvinangwa zvakanaka zvakashata
Dzimwe nguva vanotyisa vanozvifananidzira kuva vamiririri vezvipo. Vanoda kuti iwe ubatsire avo vakaurayiwa nenjodzi, kupandukira kwegandanga kana chirwere. Kazhinji kacho, vanoseka vanoteya vanhu vanofarira kugadzirisa kukakavara kwemuganhu. Nokudaro, vavariro dzako dzakanaka dzinopera sezvamunozopedzisira uchitadza kurasikirwa uye hazviwani mhinduro.
4. Kuvhara pakachengeteka
Kana mumwe munhu akakutumira mauri kutaura kuti wakakanganisa mitemo nemitemo yekambani, haufaniri kunetseka pamusoro payo. Nhamba yakawanda yeHollywood mafirimu inoratidza kuti vanhu vanobatwa sei nevanokuvadza vanozviti vave mapurisa kana varindi vetevete. Hapana hurumende inotumira mumwe munhu emaimeri. Ivo vanotofambisa tsvakurudzo yavo pamwero mukuru uye vanosvika kwamuri zvakananga. Iwe haufaniri kutumira mari kune mumwe munhu anofungidzira kuva muchengeti wekuchengeteka. Hapana chikonzero chekushushikana kunyange kana akataura kuti iwe wakambotambudzwa nyaya.
5. Basa idzva
Kusiyana kwekutengeserana kwekombiyuta kunowedzera basa uye matikiti kune vanotambura nevarombo. Kusava nebasa ndechimwe chekutuka kukuru kune wakapedza kudzidza, asi izvi hazvirevi kuti unotumira mari yako kune umwe wausingazivi. Vamwe vekutsvaga vanokukumbira kuti ubhabhatidzwe kune mawebsite uye upe maCV ako. Zvakanaka kuenderera mberi uye kutumira CV yako, asi iwe haufaniri kuripa chero chinhu sezvo pasina kambani inokudzwa inokumbira vashandi vayo kubhadhara mberi. Uye kana iwe ukakumbirwa kubhadhara chimwe chinhu usati wabhadharwa, pane mikana iyo mucheki ari kuedza kuba mari yako.
6. Girlfriend online
Nhamba huru yevanhu vanyoresa kumawebsite ekudanana zuva nezuva. Vanoda kuva nomudzimai akanaka kune zuva rekuda kana kuti kuroora. Munzira ipi neipi, nzvimbo dzekutsvaga paIndaneti hazvina kunaka kuenda nayo. Vanhu vanonyadzisa uye vanotya kazhinji vanobatanidza vanhu kuburikidza newebsite idzi. Ivo vanotanga kuva shamwari dzako, vachizvifananidzira kuva musikana akanaka uye anofadza. Ipapo chinangwa chavo ndechekuvaka ukama nemwi uye kukumbira mari. Kana mumwe munhu akati ari mumatambudziko, iwe unogona kumubatsira asi usatumira chero mari kumabhengi ebhengi.